Jaamacadda Jig-jiga oo Kaalin Fiican Ka Gashay Jaamacadaha Itoobiya. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Jig-jiga—FMN—Jaamacadda Jig-jiga ee Ku taala xarunta Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Magaalada jig-jiga ayaa sanadkan kaalinta 3aad ee dhanka waxqabad-wanaagga ku guuleysatay kadib qiimayn lagu sameeyay Guud ahaan Jaamacadaha iyo Macaahidda waxbarashada jiilka labaad ee Dalka Itoobiya Ka jira.
Shirweynihii 27 aad ee loo qabtay Waaxaha Waxbarashada Qaranka oo sanadkan ka dhacay magaalada Assosa ee Deegaanka Benishangul-gumuz ayaa shahaado sharaf ka tarjumaysa waxqabadka wanaagsan ee ay Jaamacadda Jig-jiga Muujisay sanad dugsiyeedka 2016/17 lagu guddoonsiiyay madaxdii ka socotay Jaamacadda.
Jaamacadda jig-jiga ayaa tan iyo markii la aas-aasay sanadkii 2007 dii wax weyn kusoo kordhisay geedi-socodka waxbarasho ee Deegaanka Soomaalida Itoobiya,iyada oo dabooshay baahi badan oo dadka deegaanku ay uqabeen dhanka waxbarashada ah oo horaan ay meelo dhaadheer ay u aadi jireen.waxaana haatan wax barata ku dhawaad 25kun oo arday oo culuumta noocyadeeda kala duduwan ka dhigata.
Previous Previous post: Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo Gudbay Xadka Gobolka Gedo uu la leeyahay Itoobiya.
Next Next post: Qaar Ka Mid ah Odayaasha Dhaqanka Ee Soomaaliya oo War-murtiyeed Kasoo Saaray Xaaladda Dalka Soomaaliya Ku Suganyahay.